SUSE Inotenga HPE Technology Asset Kupa Simba iro Gore Linux Vakapindwa muropa
Iyo kambani yeGerman SUSE, iyo yakabatana kwazvo nenyika yeLinux uye software yemahara, haimire kugadzira uye nekuvandudza zvigadzirwa zvayo zvakanangana nemakambani. Kunyanya nguva pfupi yadarika iri kuisa kugona kukuru mumunda wehunyanzvi uye gore, zvikamu zviviri zviri kuwana mukurumbira mumakambani. Neichi chikonzero, zvibvumirano nemamwe makambani kuzvisimbisa mune izvi hazviregi, kana mari yemari yekuvandudza.
Iye zvino SUSE yatenga iyo zvigadzirwa zvemagetsi uye tarenda rekambani HPE (Hewlett Packard Enterprise), chikamu cheiyo inozivikanwa HP yakatsaurirwa kune bhizinesi chikamu. Iyi huru yekufambisa inokuisa iwe mune chinzvimbo chiri nani maererano nemakwikwi, ayo anonyanya kuburuka pasi kuRed Hat. Ose maviri titans ari kuyedza nesimba uye kugadzira kugadzira zvigadzirwa zvikuru kuti vafadze mabhizinesi avo vatengi.
Chinangwa chekuwana uku kuzvipira kwaSUSE kupa matekinoroji e zvisikwa yakavhurwa sosi software ine yakakwira bhizimusi kukosha kune ako vatengi uye vamwe. Izvi zvakaziviswa muNuremberg naSUSE CEO Nils Brauckmann. Mune mamwe mazwi, chiratidzo cheSUSE ndechekugona kuvandudza iyo SUSE OpenStack sevhisi yeIaaS, uye nekukurumidza kupinda kweSUSE mumusika wePaaS unowedzera weCloud Foundry. Pasina mubvunzo danho rinonakidza kwazvo, sevamwe makambani eEurope akamboita.
Iyo midziyo yakawanikwa ichabatanidzwa mukati OpenStack SUSE Cloud, nepo zvinhu Cloud Kuwanikwa uye PaaS ichaita kuti SUSE iunze yakagadziriswa, bhizinesi-yakagadzirira Cloud Foundry PaaS mhinduro kumusika, inowanikwa kune vese vatengi vayo uye vanobatirana mune SUSE ecosystem. Chibvumirano ichi chinosanganisira kusarudzwa kweHPE kweSUSE semudiwa waunofarira weLinux / OpenStack / Cloud Foundry yakavhurika sosi mhinduro. Uye izvo zvakare zvakasimbisa kuzvipira kwaSUSE kuCloud Foundry Foundation.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » SUSE Inowana HPE Tekinoroji Asset yekuSimbisa iro Gore